देउवाका ज्योतिषले फेरि यस्तो भविष्यवाणी गरिदिएपछि सबै चकित, तनावमा देउवा — Sanchar Kendra
देउवाका ज्योतिषले फेरि यस्तो भविष्यवाणी गरिदिएपछि सबै चकित, तनावमा देउवा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका ज्योतिषले ओलीको बालुवाटार प्रवेश शुभ मुहूर्त र शुभ समय पारेर भएको बताएका छन् । ज्योतिष सुरेश चन्द्र रिजालले आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन ।
“सन्दर्भ : प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिच भेटवार्ताको सङ्केत ! शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक केपी शर्मा ओली शुभ समय र शुभ मुहूर्त पारेर बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमनपछि असार ३० गते ओली बालुवाटार छोडेर आफै निवास बालकोट सर्नु भएको थियो । बालुवाटारमा पहिलो पटक पुर्णतिथि,सूर्यग्रहको बार आइतबार,शुभ दिशामा बसेका चन्द्रमा ज्ञान,बुद्धि सकारात्मक सोचकी अधिष्ठात्री सरस्वती जयन्तीको शुभ समय पारेर बालुवाटार प्रवेश पछिको छल फलाई शुभ सङ्केत तथा सकारात्मक रूपमा हेरिरहेको छ । अतः सरस्वती जयन्तीको शुभ समयमा सकारात्मक भेटघाटले देशलाई नयाँ दिशातर्फ अगाडि बढाउने सङ्केत देखिएको छ ।”
त्यस्तै यता जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले आफ्ना पूर्वसहकर्मी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि कटाक्ष गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले एमसिसीलाई लेखेको पत्र बाहिरिएपछि भट्टराईले ‘भित्र खाओवाद, बाहिर माओवाद’ भनेका छन् । कांग्रेस एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि सत्ता घटक माओवादी संशोधन बिना पारित गर्न नहुने पक्षमा छ ।
तर, प्रचण्डसमेतले एमसिसी पारितको समय माग गरेको खुलेको थियो । नेपाली राजनीति पाखण्डी, दुई जिब्रे प्रवृत्तिबाट मुक्त नहुन्जेलसम्म देश नबन्ने भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘भित्रभित्र राष्ट्रघात बाहिरबाहिर राष्ट्रवाद ! माछा देखे भित्र हात,सर्प देखे बाहिर हात ! भित्र खाओवाद बाहिर माओवाद १ नेपाली राजनीति जबसम्म यो पाखण्डी दुइजिभ्रे प्रवृत्तिबाट मुक्त हुॅदैन तबसम्म देश बन्दैबन्दैन। एमसीसीजुन ढंगले गिजोलिदैछ त्यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ! अति भए खति हुन्छ है!’ भट्टराईले लेखेका छ्न् ।